Xog: Beesha Caalamka Oo Ka Xumaatay 3 Tallaabo Oo FARMAAJO Uu Qaaday - Wararka Maanta
Home/Wararka Somali/Xog: Beesha caalamka oo ka xumaatay 3 tallaabo oo FARMAAJO uu qaaday
Muqdisho (WararkaMaanta) – Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay WararkaMaanta ayaa sheegaya in beesha caalamka ay ka xumaatay tallaabooyin uu qaaday Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sheegeen iinay dhaawac culus u geysteen dedaalladii ay wadeen wakiilada caalamka islamarkaana xaaladda sii adkeeyay.
Sida aan xogta ku helnay, Beesha caalamka ayaa Madaxweyne Farmaajo u sheegay in ay qalad aheyd:
1 -In ciidanka ilaalada madaxtooyada uu geeyo madasha shirka ee Teendhada Afisyooni maalintii shirka uu furmayey ee Isniintii.
2 – Soo saarista jadwal aan lagala tashan ka qeyb-galayaasha shirka, kaasi oo ay baahisay madaxtooyada habeenkii Axadda.
3 – Iyo furitaanka shir hal dhinac ah, oo labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland ay qaadaceen.
Ayada oo arrintan ka duuleysa ayey beesha caalamka joojisay shirkii Afisyoone, waxayna taa beddelkeeda hadda xooga saareysa in shirar aan toos aheyn lagu xaliyo arrimaha taagan kahor shirka guud.
beesha caalamka Farmaajo Qaaday tallaabo Wararka Maanta Xog xumaatay
Kenya oo ku hanjabtay iney qaadi doonto tallaabo ka dhan ah Soomaalida dalkeeda ku nool